Umbhobho wentsimbi yealloyi usetyenziswa ikakhulu kuxinzelelo oluphezulu kunye nemibhobho yobushushu obuphezulu kunye nezixhobo ezifana neplanti yamandla, amandla enyukliya, kwibhoyila enoxinzelelo oluphezulu, ubushushu obuphezulu kunye nesixhobo sokufudumeza. Yenziwe ngensimbi ephezulu yekhabhoni, i-alloy structural iron kunye nentsimbi enganyangekiyo ekwazi ukumelana nobushushu ngokusebenzisa i-hot rolling (i-extrusion, i-extension) okanye i-cold rolling (umzobo).
Izinto zemibhobho ye-alloy zi
Intshayelelo kumbhobho wentsimbi yealloyi
Imibhobho yealloyi inamacandelo angekhoyo kwaye isetyenziswa kakhulu njengemibhobho yokuthutha ulwelo, njengemibhobho yokuthutha ioyile, igesi yendalo, irhasi, amanzi kunye nezinye izinto eziqinileyo. Xa kuthelekiswa nentsimbi eqinileyo efana nentsimbi engqukuva, umbhobho wentsimbi yealloyi unobunzima obulula xa ukugoba kwawo kunye namandla okugoba kuyafana. Umbhobho wensimbi ye-alloy yintsimbi yecandelo loqoqosho, esetyenziselwa ngokubanzi ukuvelisa iinxalenye zesakhiwo kunye neengxenye zemishini, ezifana nombhobho we-oyile ye-drill, i-automobile transmission shaft, isakhelo sebhayisikili kunye ne-scaffold yensimbi esetyenziselwa ukwakha. Ukwenza iinxalenye zendandatho kunye nombhobho wensimbi we-alloy kunokuphucula izinga lokusetyenziswa kwezinto, ukwenza lula inkqubo yokuvelisa, ukugcina izixhobo kunye neeyure zokucubungula, ezifana ne-ring bearing ring, i-jack sleeve, njl. ngoku, ipayipi yensimbi isetyenziswe ngokubanzi kwimveliso. Umbhobho wentsimbi ye-alloy ikwayinto eyimfuneko kuzo zonke iintlobo zezixhobo eziqhelekileyo. Umbhobho wompu kunye nomgqomo kufuneka zenziwe ngombhobho wensimbi. Umbhobho wensimbi we-alloy unokwahlulwa ube ngumbhobho ojikelezayo kunye nombhobho owenziwe ngokukodwa ngokweendawo ezahlukeneyo ezinqamlezayo kunye nokuma. Ngenxa yokuba ummandla wesetyhula ngowona mkhulu phantsi kwemeko yesangqa esilinganayo, amanzi amaninzi angathuthwa ngombhobho ojikelezayo. Ukongezelela, xa icandelo lendandatho liphantsi koxinzelelo lwe-radial yangaphakathi okanye yangaphandle, amandla afanayo. Ngoko ke, iibhobho ezininzi zentsimbi ziyimibhobho ejikelezayo.